देशदृष्टि – Page4– Blog by Milan Bagale
Posted bymilanbagale December 2, 2020 December 2, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on पहुँचयुक्त संरचनाको शब्दचित्र
Posted bymilanbagale November 30, 2020 November 30, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on न्वाइ (न्वागी) खाने दिनको सम्झना
Posted bymilanbagale November 25, 2020 November 25, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ठूला एकादशी र शिशाघाट मेलाको सम्झना
कोरोना कहरको यो बर्षको तिहारले कुनै उमंग ल्याएको छैन । आयो—गयो भनेजस्तै मात्र भयो यसपालीको तिहार । यो बर्ष यसो हुनु जरुरीपनि छ । यसपाली कोरोना आफूले पनि नसार्ने र आफूमा पनि नसार्ने संकल्पसहित मनाउनुपर्छ । म पनि त्यसै गरिरहेछु । झिलिमिलि बत्तीको गुजुल्टोले सर्लक्कै जेलिएका घरहरुलाई हेरिंरहँदा मेरो मनचाहि उडेर गाउँतिर गैरहेछ । बत्ती नभएको गाउँमा औशीको रातमा पिलपिले मैनबत्तीको लस्कर र केराको सुप्लामा बलेका कपासका बत्तीहरुले निल्न खोजिरहेको अँध्यारो र मनभित्र बलेको धप्प उज्यालो । न्यानो र रापिलो उज्यालो । बर्षभरीमा लक्ष्मी पूजाको साँझमात्र गाउँ उज्यालो हुन्थ्यो । कुनैदिन बिजुली आउला भन्ने कल्पना गर्दै लाल्टिनको बेला (शिसा) सफा गर्दा, ध्रिपी र पानसको ध्ँवासो फालेर नयाँ झुम्रो फेर्दाका ती दिनहरु शहरमा बलेका झिलीमिली बत्तीले झल्झली सम्झाउँछन् ।
बर्लाचीको बगाले डिही र पृष्ठभूमिमा लम्साल डाँडो ।
दशैंमा हरेक बर्ष गाउँ (तनहुँको तत्कालिन क्यामिन गाविस, बर्लाची गाउँ) जाने गरेपनि तिहारको छुट्टीचाहि छोटो हुने भएकोले काठमाडौं आएपछि तिहारमा आक्कलझुक्कल मात्र गईयो । गाउँमा बिजुली पुगेको पनि १५—१६ बर्ष भैसक्यो । त्यसकारण औशीको रातमा उज्यालो बाल्न आजकाल मैनबत्तीको भर पर्नु पर्दैन । केराको सुप्लामा कपासको बत्ती बाल्ने चलनपछि छैन सायद । बिजुलीबत्ती भएपछि त्यसो गरिरहनै परेन ।
आजकालको तिहार मैले बुझेको छैन । तिथिमिथि खप्टिएको हो कि चालचलन फेरिएको हो, कुकुर तिहारको दिनमै लक्ष्मीपूजा पर्छ । धनतरेस भन्ने चाडपनि भित्रिएको छ । धनतरेस के हो, मैले बुझेको छैन । गाउँमा यमपञ्चक शुरु हुनुभन्दा अगाडीको एकादशीको दिन पिँडो भुटिन्थ्यो । धान, मकैं, गहुँ भुटेर ढिकीमा कुटेपछि पिँडो तयार हुन्थ्यो । घरमा पालिएका गाई, गोरु, भैसीका लागि तिहारको विशेष परिकार हो पिँडो । मानिसका लागि सेलरोटी पाकेजस्तो ।
तिहारको पहिलो दिन काग तिहार मनाईन्थ्यो । कागलाई भात खुवाएर तिहार शुरु हुन्थ्यो । आँगनको डिलमा दुनामा राखिएको भात खान काग आयो कि आएन भन्ने खुब चासो हुन्थ्यो । दोस्रो दिन कुकुरतिहार आउँथ्यो । बर्लाचीको हाम्रो बगाले टोलमा त कसैको घरमा कुकुर थिएन । आक्कलझुक्कल पर्तिरका गाउँबाट कुकुर आईहाल्यो भने भात खान पाउथ्यो । कुकुर आउला कि भनेर आँगनको डिलमा भातचाहि राखिन्थ्यो । कुकुर तिहारको भोलीपल्ट गाई तिहार पर्दथ्यो ।
तिहारको सच्चा रौनक नै गाई तिहारको दिनमा हुन्थ्यो । यो दिनमा बाबियोको लामो तोरण बाटिन्थ्यो, तगारोको वारपार टाँग्न मिल्ने गरि । बाबियोलाई पानीमा भिजाएर बाटेपछि त्यसमा पिपलको पात, आँपको पात, तितेपाती, सयपत्री, गुद्यौली आदि फूल, कपास, १—२ का एकाध नोट, र मसिनोसंग बाटिएका ससाना कुचाहरु मिलाएर तोरणलाई झपक्क बनाईन्थ्यो । तगारोमा तोरण टाँगेपछि गाउँभर डुलिन्थ्यो । कसैका निकै लामा हुन्थे, कसैका छोटा । कसैका तोरणमा फूलैफूल हुन्थ्यो त कसैकोमा आँप, पिपल र पातीका झुप्पा ।
तगारोनजिक टाँगिएको तोरण । तस्वीर साभार— समिक्षा बगाले (२०७७ सालको तिहारको तस्वीर)
तोरण टाँगेपछि गाईपूजा गरिन्थ्यो । घरघरै गाई हुन्नथे । गाउँमा एकाध घरमा मात्र गाई हुने हुँदा पूजा गर्नेको भीडै हुन्थ्यो । गाईलाई माला र टिका लगाईदिएर घ्यूमा पकाएको चामलको पातलो रोटी र पिडो खुवाईन्थ्यो । स्टिलको गिलासले चामलको पिठोको घोल बनाएर गाईको ढाडभरि ढाँप लगाइन्थ्यो । गाईसंगै भैसीले पनि पिडो खान पाउथे । भैसीका ढाडमा रौं कम हुँने हुँदा र छाला कालो हुँने हुँदा पिठोको ढाप खुब सुहाउथ्यो । गाईभैसी रहरलाग्दा देखिन्थे । बाख्राको ढाडमा चाहि रौं नै रौ हुने हुँदा ढाप बस्दैनथ्यो । जनै पूर्णिमाको दिन हातमा बाँधेको डोरो सो दिन गाईको पूच्छरमा बाधिदिए मरेपछि बैतरणी नदी गाईको पूच्छरमा झुन्डिएर तर्न पाईन्छ भन्ने जनविश्वासले कतिपयले हातको डोरो कालो भएपनि तिहारसम्म बाधिराख्थे र पूजा गरेपछि गाईको पूच्छरमा बाध्दथे ।
२०६७ सालको गाईपूजा
गाईपूजा सकिएपछि चामलको पिठो कुट्ने काम हुन्थ्यो । अघिल्लै दिन भिजाएर राखेको चामल ढिकीमा कुट्दाको आवाजले गाउँलाई रमाईलो बनाउथ्यो । साँझ घरघरमा सेलरोटी पाक्थ्यो । घिउमा पकाईएका सेलरोटी रहरलाग्दा हुन्थे । सेलरोटी थोरै हो र ? डालैभरी हुन्थे, सोलीभरि हुन्थे । थुप्रो दिन खान पुग्ने गरि, बाड्न प्रशस्त पुग्ने गरि सेलरोटी पाक्थ्यो । गाउँमा बिहान—बेलुकै भात खाने चलनले त्यो साँझ पेटभर (८—१० वटा) सेल खाएपनि अलिकति तातो भातचाहि खाउँखाउँ लाग्थ्यो । खाईन्थ्यो । बर्षभरि थन्क्याएर राखिएका खोपे थाल (खण्डे थाल) त्यो दिन झिकिन्थ्या । माझेर टलक्क बनाईन्थ्यो । बिहा, बर्तुन, पाहुना आउँदा न हो खण्डेथाल झिक्ने । अनि तिहारमा पनि । खण्डे थालमा सेलरोटीसंग भिन्डी र करेलाको अचार, तरकारी र दूध स्वाद मानेर खाईन्थ्यो ।
गाईतिहार (लक्ष्मी पूजा) को दिन त काम कति हो कति । रमाईलो पनि कति हो कति । बिहान तोरण बाट्यो । गाईलाई माला लगायो । पिँडो खुवायो । साँझ रोटी पाक्दै गर्दा घरैभर मैनबत्ती बाल्यो । पिढि, बार्दली, कोठा, कोठी, भण्डार, गोठ, तला, आँगनको डिल, तुलसीको मोठा सबैतिर मैनबत्तीको लस्कर । हेर्दै लोभलाग्दो देखिन्थ्यो, हावाले ढलाएर आगो लाग्ला कि भनेर सजग पनि हुनुपथ्र्यो । मैनबत्तीसंगै केराको सुप्लामा कपासको बत्ती तेलमा भिजाएर पनि बालिन्थ्यो । अनि बल्ल रोटी खाने पालो । देउतालाई चढाएपछि हाम्रो पालो आउथ्यो । काँडा पलाएका झुरुमझुरुम रोटी । कति रहरलाग्दा पो हुन्थे ।
साँझ बत्ती हेर्न गाउँभर डुलिन्थ्यो । बत्ती बाल्नपनि सघाईन्थ्यो । डुलेर आउँदा हावाले घरमा बत्ती निभाएको रहेछ भने फेरि बालिन्थ्यो । तिहारमा गाउँमा अलिअलि पटका पनि भित्रिन्थ्यो । पटका नहुनेले चुरोटको झिलझिलेमा सलाईका काटीको मसला जम्मा पारेर लोहोराले थिचेर पनि पड्काउथे । सलाई मास्यो भनेर घरमा पुगेपछि यसो गर्नेका कान बटारिन्थे ।
गाउँमा टाढा—टाढाबाट दिदी बहिनी र ससाना भान्जाभान्जी आउने मुख्य दिनपनि यही भएको हुँदा गाउँ गम्मागम्मी हुन्थ्यो । घरधन्दा नभ्याउनेहरु गोरु तिहारको दिनमा आउनुहुनथ्यो । धेरैजसोका घर भरिभराउ । असाध्यै रमाईलो माहोल हुन्थ्यो । यो सबै रमाईलोमा रंगोलीको रमाईलोचाहि भित्रिएको थिएन । रंगोली देखेको त काठमाडौं आएपछि मात्र हो । यसको सांस्कृतिक मूल्य मान्यता नबुझेकोले रंगोली आफन्त होइन, पाहुँनाजस्तो चाहि लाग्छ । हेर्दा राम्रो छ । कला देखाउने मेसोपनि हो । घरको मूलढोकामा सुन्दर कला हुनु राम्रै हो । त्यसकारण रंगोलीलाई तिहारमा स्वागत छ । सायद गाउँतिर पनि आजकाल रंगोली बन्छ होला ।
गाई तिहारको भोलीपल्ट गोरुतिहार आउथ्यो । बारी जोत्दाजोत्दा हत्तु हुने गोरुले त्यो दिन माया पाउथ्यो । जोत्ने समयमा त मुखमा कोर्को, ढाँडमा लठ्ठीको सुम्लो र घाँटीमा ट्याप्प कसिएको नारा र जोतारा । कठै गोरुको जुनी । गोरु र खच्चडको जस्तो दुखी जिन्दगी त कुन प्राणीको होला र । अरुदिन जति चुटाई खाएपनि त्यो दिनचाहि गोरुले आराम र माया पाएको देख्दा खुशी लाग्थ्यो । गोरुलाई माला लाईदिने, पिडो खान दिने, ढाडमा स्टिलको गिलासले पिठोको ढाँप लगाउने काम हुन्थ्यो ।
भाइटिकाको दिन लक्ष्मी पूजाको दिनको जस्तो ब्यस्तता हुँदनथ्यो । रोटी पहिल्यै पाकिसकेपनि ताता रोटी खाने रहरले सो दिन बिहान धेरथोर सेलरोटी पाक्दथ्यो । टिकाको साईत चाडै छ भने अघिल्लै दिन सयपत्री र मखमली फूल टिपेर राखिन्थ्यो । टिकाको साईत ढिलो निस्कँदा सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो । माला गाँस्न, लिपपोत र बढारकुढार गर्न, रोटी पकाउन, तरकारी अचार बनाउन समय पुग्दथ्यो । ९—१० बजे साईत हुँदा त साईत छोप्नै हम्मेहम्मे पर्दथ्यो । टिको लगाउन केराको पात चाहिन्थ्यो । एउटा रेसो चिरेर निधारमा ठिक्क हुनेगरि राखेर त्यसमाथि टिका लगाउँदा टिका सिधा हुन्थ्यो ।
तिहारको बिर्सनै नसकिने पक्ष देउसी भैलो पनि थियो । मैले त बाल्यकालमा जम्मा एकपटक देउसीभैलो खेलें । ७—८ घरका ८—१० जना केटाकेटी मिलेर भैलो खेल्दा १२—१५ रुपैंया, केही माना चामल र अलिअलि रोटी जम्मा भएको थियो । पैसा त बाँडेर लियौं कि जस्तो लाग्छ । उठेको चामलमा आमाहरुले मसिनो चामल थपिदिएर, दिदीहरुले पकाइदिएर लामो गराको डिलतिर हामीले बनभात खाएका थियौं । मैले भैलो नखेलेपनि देउसी भैलो खेल्न ठूल्ठूलो टोली आउँथे । भैलो खेल्नेहरु प्राय १०—११ बजेतिर आउँथे । टर्चलाईट बाल्दै, सुसेलो हाल्दै, मादल बजाउँदै । भैलो खेल्नेहरु आएपछि ढोका खोलेर लाल्टिन बालेर पिढिको थाममा झुन्ड्याईन्थ्यो । पिढिभरी गुन्द्री बिछ्याईन्थ्यो । युवाहरुको रमाईलो बाहेक हाम्रोतिर विद्यालय र पुस्तकालयलाई चन्दा उठाउन पनि भैलो खेल्ने चलन थियो । यो भैलो त निकै लामो दिनसम्म चल्थ्यो । टोलटोलमा खेल्दै आउने । यसरी संघसंस्थाको लागि भैलो खेलिदा दिने रकम अरुलाई दिनेभन्दा केही बढी नै हुन्थ्यो । अधेरी रातमा साथीहरु त्यसरी रातीराती भैलो खेल्दै हिडेको देख्दा अचम्म लाग्थ्यो । डरपनि लाग्थ्यो ।
तिहारमा महिलाहरुलाई सास फेर्न फुर्सद हुँदैन । कामैकाम । लिपपोत । बढारकुढार । अनेक परिकार बनाउ । माला गास । पिठो कुट । रोटी पकाउ । पिडो भुट । सम्झँदै अत्यासलाग्दो । कतिपय पुरुषहरुचाहि तासको खालमा बेफुर्सदी बनिदिन्छन् । खालमै रात बिताउछन् । दिन बिताउछन् । कतिपयलाई त टिका लगाउने फुर्सद पनि हुँदैन । यो पारा मलाई साह्रै ननिको लाग्छ ।
तिहार उज्यालो भित्र्याउने चाड हो । दाजुभाई र दिदीबहिनी भेटाउने चाड हो । एक —अर्कालाई माया र सम्मान गर्ने चाड हो । दाजुभाइ मात्र पूज्ने चाड होइन । दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई बराबर पूज्ने चाड हो । छोरी नहुनेका घरमा त तिहार खल्लो हुन्छ । जिन्दगीको एउटा गाढा रंग नै नभएजस्तो । उराठलाग्दो । यो चाड सम्पतीको अभद्र प्रदर्शन गर्ने, रक्सीको खोलो बगाउने र तासको खालमा बसेर आफूलाई मास्ने चाड नबनोस् । सबैलाई तिहारको शुभकामना ।
(२०७७ साल मंसीर १ गते हिमालखबर डटकममा प्रकाशित लेखलाई परिमार्जनसहित राखिएको)
Posted bymilanbagale November 20, 2020 November 20, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on गाउँको तिहारको सम्झना
कोरोनाको कहर बढ्दै जाँदा ‘हर घर क्वारेन्टिन’ हुँदै ‘हर घर आइसोलेशन’ का लागि मानसिक र भौतिक रुपमा तयार हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । अस्पतालमा बेड नपाईने अवस्था दिनदिनै बढ्दो छ । घर क्वारेन्टिनमा बस्नेको त तथ्यांक भेटिदैन । एक दिनमात्र कतै गईयो भनेपनि फर्केर केहीदिन घरमा अलक्क बस्नुपर्ने अप्ठेरो अवस्था आएकोले र त्यसरी बस्नेको रेकर्ड राख्ने कुनै निकाय नभएकोले अब यसको विश्वासयोग्य तथ्यांक भेटिंदैन । आइसोलेशनमा बस्नेहरुको तथ्यांकचाहि सरकारले दिने गरेको छ, भलै त्यसमा पनि सबैजसो संक्रमितहरु नअटाएका हुनसक्छन् ।
भूकम्पमा नभत्केको घर । यत्तिको घरमा सामान्य परिमार्जन गरि एकान्तवास बस्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार २०७७ साल कार्तिक २२ गतेसम्ममा आइसोलेशनमा बस्नेको संख्या ३५४३५ छ । जतिजना संक्रमित, उतिजना आइसोलेशन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेब पोर्टलमा जनाईएको छ । अस्पतालको आइसोलेशन, होटल आइसोलेशन र घर आइसोलेशनमा बस्नेको संख्या छुट्याईएको छैन ।
स्वास्थ्यखबर डटकमले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै जनाए अनुसार २०७७ साल कार्तिक २२ गतेसम्ममा कुल संक्रमित (३५४३५) मध्ये २८,८२० जना होम आइसोलेशनमा रहेका छन् । सो समाचारमा जनाईए अनुसार होम आइसोलेशनमा बस्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशमा (१८,४८६) रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा ४,५७० जना, प्रदेश २ मा ९८५ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २,१८६ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६८५ जना, गण्डकी प्रदेशमा १७१० जना र कर्णाली प्रदेशमा २९८ जना ब्यक्तिहरु होम आइसोलेशनमा रहेका छन् । सबै संक्रमितलाई सरकारी तथ्यांकले नसमेटेको पनि हुनसक्छ । जे होस् यो तथ्यांकले देशैभर कोरोना संक्रमितहरु होम आइसोलेशनमा बसेको र हस्पिटलको आइसोलेशनमा बस्नेको संख्या न्यून रहेको पुष्टि गर्दछ।
होम आइसोलेशनको कहानी शुरु गर्नुअघि स्कूल क्वारेन्टिनको कुरा गर्छु । गत असोज दोस्रो हप्ता म काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका, मण्डन देउपुर नगरपालिका तथा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका र हेलम्बु गाउँपालिका पुगेको थिएँ । स्वास्थ्य संस्था, क्वारेन्टिन र आइसोलेशन स्थलहरु अपांगता भएका ब्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, बालबालिकाका लागि कत्तिको सहज छन् भनेर हामीले सरसर्ती अध्ययन—अवलोकन गरेका थियौं । सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला हुन् । ती जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सिद्धिने चरणमा छ । सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा विद्यालय भवनहरु सुविधासम्पन्न बनेका छन् । कतिपय विद्यालयमा नर्सहरु पनि कार्यरत छन् । कोरोनाका कारण विद्यालयहरु अचानक अस्पतालजस्ता बन्न पुगे अर्थात क्वारेन्टिन स्थल बने । आपतविपद्मा विद्यालयभित्र सिंगो समुदाय अटायो । घच्चमच्च होइन, आरामले अटायो । प्रर्याप्त खानेपानी र शौचालय, उज्याला र सफा कोठादेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्मको अभाव भएन । सामान्य परिमार्जन गरे क्वारेन्टिनमात्र होइन, आइसोलेशन सेन्टर नै बनाउन सक्ने अवस्था त्यहाँ देखियो । तर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवासको चित्रचाहि ठ्याक्कै उल्टो छ । पुनर्निर्माण कार्य चलिरहेका सबै जिल्लामा अधिकांश घर एककोठे र दुइकोठे छन् । घरको बहुउपयोगी ठाउँ (कोठा, कोठी, बरण्डा, तला, भण्डार, सिकुवा आदि) जति सबै खुम्चेर साँघुरो पिढी र २ कोठामा जिन्दगी सीमित हुन पुगेको छ । नयाँ घर बनाएर पुराना घरपनि सामान्य मर्मत गरेर बस्नेहरुलाई त सजिलै भएको छ । भएकै घरमा थप २ कोठा थपियो । तर पुरानो घर कामै नलाग्ने अवस्था भएकाको जिन्दगी नयाँ घरमा कष्टपूर्ण तरिकाले चलिरहेको छ ।
भूकम्पपछि बनेको सानो घर ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कोभिड १९ केशको आइसोलेशन ब्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका’ बनाएको छ । सो निर्देशिका २०७७ साल जेठ २० गते स्वीकृत भएको छ । निर्देशिकामा अस्पताल आइसोलेशन र घर आइसोलेशन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रावधानहरु छन् । लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएकालाई घरमै राख्न सकिने सो निर्देशिकाले जनाएको छ । निर्देशिकामा घर आइसोलेशन सम्बन्धी १४ वटा बुँदाहरु छन् । त्यसमा हावा खेल्ने तथा प्रकाश आउने छुट्टै कोठामा संक्रमितलाई राख्नुपर्ने, उपचार अवधिभर बाहिर ननिस्कने र आवश्यक सामाग्री परिवारका सदस्यसंग मगाउने, खानपिनको ब्यवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउने, प्रयोग गरिएका भाडाहरु सुरक्षित रुपले सफा गर्ने र सुकेपछि पुन प्रयोग गर्ने कुराहरु समेटिएको छ । त्यस्तै, स्नानघर/शौचालयको छुट्टै ब्यवस्था गर्ने र सामूहिक रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा प्रत्येक प्रयोगपछि सरसफाईमा प्रयोग हुने ‘डिसइन्फेक्टन्ट’ ले राम्ररी सफा गरेर मात्र अरुले प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै हात धुने बेशिनहरु संक्रमणको स्रोत हुने प्रर्याप्त जानकारी गराई दाँत माझ्ने ब्रस लगायतका सामान राख्न छुट्टै बेशिनको प्रयोगको प्रयोग गर्न सुझाईएको छ । त्यस्तै, ढोका, मेशिनका ह्यान्डल, टेबुल जस्ता धेरै ब्यक्तिले चलाउने सामान डिसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरि नियमित सफा गर्ने, भाडाकुँडा या कपडा धुँदा पन्जा लगाएर धुने वा मेशिनमा छुट्टै धुने र घाममा सुकाउने आदि कुराहरु उल्लेखित छन् । स्वास्थ्य, सरसफाई र पूर्वाधारका कुराहरु यसमा समेटिएका छन् ।
घर आइसोलेशनका यी प्रावधानहरु पढिरहँदा मैले नेपालका शहरी र ग्रामीण भेगका बस्ती र बस्ने शैली सरर सम्झिएँ । पहिला शहरकै कुरा गरौं । घरबेटी र डेरावाल गरि दुई वर्गका मानिस शहरका थरिथरि घरमा बस्छन् । कथा डेरावालबाटै शुरु गरौं । डेरावाल थरिथरिका छन् । एउटा साझा बैठक/पाहुना कोठा, एउटा भान्सा, एउटा सुत्ने कोठा र एउटा बाथरुम सहित सानो फ्ल्याट लिएर बस्ने साना बच्चासहितका दम्पती वा दम्पतीमात्र वा राम्रै पैसा कमाउने अविवाहित युवायुवती शहरमा धेरै छन् । सपरिवार अलि ठूलो फ्ल्याट (एउटा छुट्टै बैठक कोठा, एउटा अट्याच बाथरुम सहितको सुत्ने कोठा, साझा शौचालय/बाथरुम, थप २—३ सुत्ने कोठा, भान्सा र डाइनिङ कक्ष) लिएर बस्ने उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका ब्यक्तिहरु पनि शहरमा धेरै छन् यस्तो बसाईमा बैठककोठा पाहुना कोठाको रुपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्नेगरि होचा दुईवटा खाटहरु पनि राखिएका हुन्छ । एउटा सुत्ने कोठा र एउटा भान्साकोठा भाडामा लिएर बस्ने, एउटा कोठामा एक्लै बस्ने, एउटा कोठामा दम्पती बस्ने, एउटा कोठामा एकजना बस्ने, दुईजना विद्यार्थी मिलेर दुईटा खाट र एउटा कुनामा किचेन र्याक राखेर त्यही पकाएर खाने अनि ज्याला मजदूरी गर्ने ५—७ जना मिलेर एउटै कोठामा सुखदुख बस्ने—खानेहरु पनि धेरै छन् । यसरी शहरमा भाडावालाहरु थरिथरिका छन् । ससाना टहरा र अन्तरिम आवास (१ वा २ कोठा, एक भान्सा र शौचालय वा एउटैमात्र कोठामा एक्लै वा धेरैजना) मा गुजारा चलाउने निम्न आय भएका ब्यक्तिहरु पनि शहरमा धेरै छन् ।
श्हरलाई सरसर्ती नियाल्दा जति नै ठूलो र अग्लो घर भएपनि अधिकांश घरबेटीको भागमा १.५ तलाजति पर्छ । उनीहरुको बसाईको शैलीलाई नियाल्दा एउटा बैठक कोठा, साझा बाथरुम/शौचालय, एउटा एट्याच बाथरुम/शौचालय भएको कोठा, थप २—३ सुत्ने कोठा अनि कौशी सहितको माथिल्लो तलामा भान्सा, डाइनिङ कक्ष, पूजा गर्ने ठाउँ, साझा शौचलय र लुगा धुने मेशिन राख्ने ठाउँ हुन्छ । थोरैको मात्र छुट्टै पाहुनाकोठा हुन्छ । घर भाडामा दिने अधिकांश घरबेटीको बैठक कोठामा पनि सोफासंगै दुईवटा होचा खाटहरु पनि हुन्छन् । त्यसकारण बैठक कोठाले पाहुना कोठाको पनि काम गर्छ । सिंगै घर घरधनीले मात्र प्रयोग गर्ने ,सानो अपार्टमेन्टमा बस्ने, हाउजिङमा सिंगो घर लिएर बस्नेहरुको संख्या धेरै पातलो छ ।
काठमाडौंकै कुरा गरौं । यहाँ थरीथरीका घरबस्ती छन् । शहरको मध्यभागमा पुरानो र निकै बाक्लो बस्ती छ । ती घरमा घरबेटी र डेरावाल दुबै बस्छन् । त्यहाँ छानो वा छत जोडिएका घरहरु छन् । मध्यभाग भन्दा वरिपरि पक्की घरहरु छन् । त्यो सेरोफेरोमा सवारी साधन नहुने विद्यार्थीहरुको बसोवास बढी छ (कीर्तिपुरको कुरा छुट्टै भयो) । मध्यभाग र मध्यभागको वरिपरि फ्ल्याटभन्दा कोठा बढी चल्तीमा छ । रिंगरोडको वरिपरि र त्योभन्दा बाहिरचाहि कोठाभन्दा सानो फ्ल्याट लिएर बस्नेहरु र मोटरसाइकल हुने डेरावालहरु बढी छन् । रिंगरोड बाहिर कोठा दिने चलन अलि कम छ । यसरी एउटा शहर थरिथरि घरबेटी र डेरावालले भरिएको छ । घर, कोठा, फ्ल्याट थरिथरि छन् । काठमाडौं बाहिरका शहरमा चाहि भित्री र बाहिरी दुईखाले बस्ती छन् । प्रत्येक शहरका न्यूरोड वा मूलसडक भनिने ठाउँहरु ब्यापारिक गतिविधिका लागि चर्चित छन् भने बाकी ठाउँहरु आवासीय प्रयोजनका लागि चल्तीमा छन् । राजमार्गमा चाहि रिबनजस्ता लामालामा बस्तीहरु छन् । ती बजारमा चाहि घरहरु पूरै जोडिएका छन् । भुइँतल्लामा ब्यापारिक गतिविधि र माथिल्ला तल्लाहरुमा कोठा भाडामा दिने, घरबेटी माथिल्लो तल्लामा बस्ने जीवनशैली देखिन्छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, बजार, र गाउँ आदि विविध नाम भएका बस्तीहरुमा कोरोना संक्रमित सदस्यलाई घरभित्रै राख्दा केकस्तो अप्ठेरो पर्ला त ? अब त्यसको लेखाजोखा गरौं । शुरुवात शहरबाटै गरौं । बंगला हुनेहरुलाई होम आइसोलेशनमा समस्या पर्दैन । बंगलामा बाथरुम/शौचालय धेरै बनाईन्छ । प्रत्येकजसो कोठामा बरण्डा पनि बनाईन्छ । त्यसैले नुहाएपछि लुगा सुकाउन, खाना खाएपछि भाडा सुकाउनपनि त्यति अप्ठेरो पर्दैन । घाम ताप्नपनि समस्या हुँदैन । घरका केही तला भाडामा दिएर १—१.५ तला आफूले प्रयोग गर्ने घरबेटीलाई छुट्टै कोठामा बस्न समस्या नभएपनि बाथरुमको चाहि समस्या पर्नसक्छ । परिवारमा एकजना मात्र संक्रमित हुँदा बाथरुम जोडिएको कोठा प्रयोग गर्न दिईयो भने धेरै सजिलो हुन्छ । २—३ जनालाई संक्रमण भयो भने अथवा बाथरुम जोडिएको कोठा छैन भने कोरोना नेगेटिभ नआएसम्म एउटा बाहिरी बाथरुम/शौचालय संक्रमित सदस्यलाई प्रयोग गर्न दिएर बाकीले अर्को प्रयोग गर्न सकियो । यहाँपनि त्यति समस्या भएन ।
ठूलो फ्ल्याट लिएर बस्नेहरुसंग घटीमा दुईवटा बाथरुम/शौचालय हुन्छ । कोठापनि प्रशस्त हुने हुँदा १५—२० दिन अलक्क बस्न, खान खासै समस्या हुँदैन । सपरिवार बसिएको छ र एउटामात्र शौचालय छ भने त्यहाँचाहि थप केही अप्ठेरो अवस्था आउँछ । सचेत भएर हरेकपटक सफा गर्दै प्रयोग गर्न सकिन्छ । कोठाकोठा भाडामा दिईएको घर छ र भाडामा बस्ने सबैका लागि एउटामात्र शौचालय छ भने त धेरै अप्ठेरो अवस्था आउँछ । अझ एउटै कोठामा धेरैजना बसिएको छ भने त त्यसले निकै जटिलता ल्याउँछ ।
होम आइसोलेशनमा बस्न गाउँमा चाहि त्यति धेरै अप्ठेरो हुँदैन । कोही सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भयो भने मूल घरसंगै जोडेर काठ र जस्तपाता प्रयोग गरि तुरुन्त अस्थायी कोठा बनाउन सकिन्छ । बारीको छेउमा टिन र बोरा बारबेर गरेर अस्थायी शौचालयपनि बनाउन सकिन्छ । धन्सार सफा गरेर पनि बस्न सकिन्छ । पिढिको छेउमै बारेर पनि बस्न मिल्यो । पुग्दो कोठा छ भने त समस्यै भएन । घर टाढाटाढा हुँने हुँदा छिमेकीलाई सर्ला कि भनेर डराउने अवस्थापनि रहँदैन । गाउँमै असाध्यै बाक्लो बस्ती छ र कोठाचोटा मिलाउने ,शौचालय बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने गाउँलेहरु मिलेर बस्तीको नजिकै सामूहिक आइसोलेशन पनि बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर शहरमा एउटा कोठा लिएर बस्ने, एउटै शौचालयले धेरैजनाले प्रयोग गर्ने, एउटै कोठामा धेरैजना बस्ने अवस्थाले यसले धेरैथरी जटिलता निम्त्याउँछ । जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका ब्यक्ति, सुत्केरी महिला र बालबालिकालाई थप कष्ट निम्त्याउँछ । घरबेटीले सहज ब्यवहार नगरिदिंदा मानसिक तनावपनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । शहरमा घरैघर जोडिने हुँदा एउटाको घरमा कोरोना लागेमा पूरै टोल नै आतंकित हुन्छ । आतंकित भएको टोलले सहज ब्यवस्था मिलाउन मद्दत गर्नुसट्टा उनीहरुलाई राम्रो ब्यवहार नगर्ने ,आतंकित हुने, परपर भाग्ने, अप्ठेरोमा मद्दत नगर्ने जस्ता घटनाहरु भईरहेका पनि छन् ।
यसरी हाम्रा घरबस्ती र बसोवासको शैलीलाई सरसर्ती नियाल्दा निकै थोरै नागरिकले मात्र होम आइसोलेशन वा होम क्वारेन्टिनमा सहजै बस्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
अन्तमा आफ्नै अनुभव जोड्छु । असोज दोस्रो हप्ता काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सेन्टरबाट फर्केपछि म १५ दिन घर क्वारेन्टिनमा बसें । टिचिङ अस्पतालमा नर्सिङ विषयमा स्नताकोत्तर तहमा अध्ययनरत मेरी श्रीमती रन्जिताजीपनि अस्पतालको केही दिनको प्रयोगात्मक अभ्यास सिध्याएर घर क्वारेन्टिनमा बसिन् । म फिल्डबाट फर्केको ७ दिनपछि उनी आइन् । हाम्रो घरमा दुईवटा शौचालय र एउटा छुट्टै नुहाउने कोठा छ । मैले लेखपढ गर्ने सानो कोठालाई आफ्नो क्वारेन्टिन बनाएँ, सधैं बस्ने गरेको कोठा रन्जिताजीको क्वारेन्टिन बन्यो । शौचालय साझा रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । बाआमाले प्रयोग गर्ने शौचालय प्रयोग गर्ने कुरै आएन । अनि हामी अलिकति डरायौं । एकजना अस्पतालबाट, एकजना फिल्डबाट फर्केको । हामीले प्रयोग गरेपिच्छे शौचालयको ढोकाको ह्यान्डल, चुकुल, बेशिनको धारा, फ्लस, बिजुलीको स्वीच लगायत सबै ठाउँमा हरेक पटक औषधी छर्केर मात्र प्रयोग गर्यौ । दिनभर पटकपटक यसै गरिरहनुपर्यो । एकजनामा कोरोना छ र अलिकति मात्र चुकियो भने सर्ने डर । त्यसै यो काममा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । घरभित्र मास्क कहिल्यै छोडेनौं । बा आमाले खाना ल्याएर हाम्रो थालमा अलक्क राखिदिनुहुन्थ्यो । हामी टाढाटाढा बसेर खान्थ्यौं । आ—आफ्ना भाडा माझेर घाममा घोप्ट्याउथ्यौं । साबुन, खानेपानीको जग, गिलास, ब्रस, मन्जन आफ्नो कोठामा राख्थ्यौं । छततिर जाँदा ढोकाको चुकुल खुट्टाले खोल्थ्यौं । च्यानलगेट पनि खुट्टाले खोल्थ्यौं । बाले साझा ढोकाहरु प्राय खुल्लै राखिदिनुहुनथ्यो । छतमा बस्ने मुढापनि आ—आफ्नो प्रयोग गर्दथ्यौं । कोठाबाहिर सबैसम्म निस्कन्थ्यौं । घरभित्रको घुमघाम, बातचित, छलफल लगभग ठप्पै थियो । छतमा जाँदा भर्याङको रेलिङ झुक्किएर छोइएला कि भनेर सचेत हुन्थ्यौं ।
यसरी कोरोना नलागीकनै कोरोना लागेझैं १५ दिन घरभित्र गुर्जादा घर आइसोलेशनको मर्म राम्ररी बुझियो । साँघुरो बसाई छ भनेपनि सकेसम्म घलमिल नहुने, मास्क लगाईरहने, हात सफा गरिरहने, आफ्ना लुगा आफैंले धुने, आफ्ना भाडा आफैंले माझ्ने, एउटै थाल कचौरा, गिलास प्रयोग गर्ने, ती सामान आफैंसंग राख्ने र बाथरुम प्रयोग गर्दा शत प्रतिशत सचेत हुने, स्वीच कुइनाले थिच्ने, ढोका खुट्टाले धकेल्ने, चुकुल र धारा छोएपिच्छे औषधी छर्किने जस्ता काम गरे घर आइसोलेशन वा घर क्वारेन्टिन जिन्दगीले परिवारका सदस्य वा छरछिमेकलाई नपिर्ला कि ? मैले त घर क्वारेन्टिन जिन्दगी निकै अलक्क बसेर गुजारें । तपाईंहरु पनि सकेको अलक्क बसेर कोरोना बार्नुस् है । अलक्क बसे कोरोना हलक्क बढ्दैन । कोरोना हलक्क बढ्नु दुख पाउनु हो । आफ्नो घर, फ्ल्याट, कोठा अनुरुप थप सचेत होऔं । संरचना सुधार्न सकिन्छ । मिलाउन सकिन्छ । तर बानी सुधारे सस्तो पर्छ । जोखिमबाट जोगिन रहर गर्नेको जय होस् ।
(हिमालखबर डटकममा २०७७ साल कार्तिक २७ गते मंगलबार प्रकाशित लेख)
Posted bymilanbagale November 15, 2020 November 15, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on होम आइसोलेशन, बसोबास शैली र हाम्रा घरबस्ती….
Posted bymilanbagale November 8, 2020 Posted inUncategorized1 Comment on घुमघामका अप्ठेरा घुम्ती
Posted bymilanbagale November 4, 2020 November 4, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on कोरोना कहरको डायरी पल्टाउँदा….
Posted bymilanbagale October 25, 2020 October 25, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on कोरोनाकालको दशैं र गाउँको सम्झना
Posted bymilanbagale September 17, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on राष्ट्रिय सभामा वामदेव कि कुलमान ?
Posted bymilanbagale September 11, 2020 September 11, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सर्प पाल्ने कि चुल्हो बाल्ने ?